Runtastic Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Runtastic Pro dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra ananantsika ao amin'ny App Store mba hampihatra fanatanjahantena marobe sy handraisana an-tsoratra ny fotoam-pianarantsika. Ireo olona ao ambadik'ity fampiharana ity dia nanolotra ireo fiasa izay takian'ireo mpampiasa indrindra nandritra ny fotoana ela ary nahatonga ny fampiharana tonga lafatra.
Ny vidin'ny Runtastic Pro mahazatra ao amin'ny App Store matetika dia 4,49 euro fa raha manararaotra ny tolotra misy ianao dia afaka mahazo ilay fangatahana malalaka tanteraka. Raha manana smartphone Android ianao dia azonao atao ihany koa ny misintona azy amin'ny Google Play nefa tsy mandoa na inona na inona.
Inona no tsy itovizan'ny kinova Pro an'ny Runtastic amin'ny fanontana maimaim-poana ny fampiharana?
Miaraka amin'ny kinova Pro an'ny Runtastic dia hanana fidirana amina fanangonana endri-javatra tena ilaina ianao, azonao atao ihany koa ny manafoana ny sora-baventy manao dokam-barotra izay miseho ary mety hahasosotra ny sasany. Ity ny lisitry ny rehetra fiasa izay azonao vohana raha misintona Runtastic Pro ianao maimaim-poana:
Mpanazatra feo: Audio feedback mifototra amin'ny safidinao manokana
Fiatoana fiara: Miato ho azy ny fivoriana rehefa mijanona tsy mihetsika ianao
lalana: Mamorona na mahita làlana ho an'ny fampihetseham-batanao amin'ny Runtastic.com & ampifanaraho amin'ny telefaoninao
Soritry ny loko: Ny fiovana toy ny hafainganam-pandeha, ny haavony, ny tehezan-tendrombohitra sns, aseho amin'ny loko.
Mametraha fanamby amin'ny tenanao: Fanamby ny tenanao amin'ny fifaninanana mifanohitra amin'ny valin'ny zavatra nataonao taloha
Powersong: Mpilalao mozika mitambatra sy hery hamelombelona ny fampihetseham-batana
Tanjona fanofanana: Manatsara ny fampihetseham-ponao amin'ny faritry ny tahan'ny fo, ny tanjon'ny kaloria, na ny hafainganana.
Fampiofanana elanelam-potoana & mpanazatra ary sary mavitrika miaraka am-piandrasana
Geotagging: Makà sary mandritra ny fampiofanana anao & zahao amin'ny Internet miaraka amin'ny sari-tany
Fampahalalana momba ny toetrandro, mari-pana & fiposahan'ny masoandro / filentehan'ny masoandro
Tsara foana ny mampiasa ny iPhone ho naman'ny havizanana ka amin'ity tolotra ity, tsy manana fialantsiny intsony ianao tsy manana Runtastic Pro napetraka.
Raha tsy anjaranao ny fanatanjahantena dia ampahatsiahivinay anao fa afaka manao izany ianao izao download for free ny lalao VEHIVAVY y Fo Mahery fo (izay mazàna mitentina 4,99 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Runtastic Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka intsony. Manana ny vidiny 4,99.-Euros.
Fanolorana tselatra ve io ?? 😠
Izany dia miankina amin'ny zavatra heverintsika fa tselatra. Nihena nandritra ny 24 ora mahery izy io. Miarahaba anao!
Nametraka runtastic tao amin'ny ipfone 5 aho ary nafana dia mafana ny bateria lany tao anatin'ny adiny iray ary tsy nahavita ny fanazaran-tena, misy mahalala ve hoe mety ho izy, ho diso fipetrahana misaotra noho ny hevitrao
Raha mitazona gadget Apple taloha ianao dia afaka mahazo vola be